Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ France Odsonne Edouard Childhood Akụkọ gbakwunyere Ezigbo Ihe Ndị E Dere Ndụ
Ihe omuma anyi nke Odsonne Edouard na-egosiputa Eziokwu banyere Akụkọ nwata ya, Nko mbido, ezin’ulo, ndi nne na nna, enyi nwanyi / nwunye ka ha buru, ndu ndu, ugboala, uru di na ndu nke onwe.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, nke a bụ akụkọ banyere ndụ ndụ onye egwu bọọlụ, site na mgbe ọ bụ nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ndụ gị sie ike, lelee oge ọ bụ nwata gaa na nnukwu ụlọ ngosi - nchịkọta zuru oke nke Odsonne Edouard's Bio.
Odsonne Edouard Biography- Lee mmalite ndụ ya na mbili elu.
Ee, gị na m maara na ọ bụ otu n'ime ndị kacha egwu Celtic kemgbe ọchịchị Henrik Larsson n'etiti 1997-2004.
Agbanyeghị, anyị achọpụtala na ọ bụ mmadụ ole na ole na-agba bọọlụ tụlere ịgụ Odsonne Edouard's Biography, nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Odsonne Edouard Akụkọ Nwata:
Maka ndị na-ebido ebido, o nwere aha otutu- "Rọketị" na "Ime Anwansi Odsonne". A mụrụ ụmụ amaala ọnwa ise tupu 1998 FIFA World Cup- na ụbọchị 16 nke Jenụwarị, 1998 n'obodo Kourou, French Guiana.
Ọ bụrụ na ịmaghị ebe ndị nne na nna Odsonne Edouard nwere ya, Kourou bụ mpaghara dị n'ụsọ Oké Osimiri Atlantic nke French Guiana, ngalaba South America na mba ofesi France. Site na Google, obodo ahụ dị 7,086 kilomita site na France.
Nke a bụ Kourou- obodo ebe ndị nne na nna Odsonne Edouard nwere ya. Ọ dị kilomita 7,086 site na France.
Edouard, n'otu n'ime ajụjụ ọnụ ya, kpughere na ọ tolitere ịbụ nwatakịrị echebere nke na-amalite n'oge, na-enwe mmasị ịmụmụ ọnụ ọchị ma ọ bụ gụda ntị na ntị. Ọbụna n'oge o mere okenye, ọ dịghị ihe gbanwere maka onye na-eti ihe.
Ọzọkwa, na ajụjụ ọnụ ahụ, ọ kwupụtara otu oge na nwata, na ọ bụghị mmụọ ozi. Site na itinye aka, ọ pụtara na o mere nzuzu ọ bụla - ọ dịghị ihe jọgburu onwe ya ị ga-emenye ụdị ezinụlọ ya.
Ná mmalite nke oge ọ bụ nwata, ikiri bọlbụ na TV ma gaa n'ámá egwuregwu abụwo ihe ọ bụla.
Lovehụnanya na-enweghị njedebe maka egwuregwu ahụ mere ka ọ bụrụ onye na-agba bọl, nke na-eme ka ọ hụ na ya na ọdịnihu ya.
Odsonne Edouard Mmalite:
Dị ka ị ga-ahụrịrị, onye agha French si n'otu n'ime ókèala ndị ahụ nke France chịrịrị.
Mgbe ị kwuchara nke ahụ, na-esote, ị nwere ike iche na nne na nna ya sitere na French Guyana. Eziokwu bụ, ị hiere ụzọ na nke ahụ.
You Ndi Odsonne Edouard nne na nna esighi na French Guiana n'agbanyeghị na amuru nwa ha nwoke ebe ahụ.
Ma nne ya na nna ya bụ ndị Haiti bụ ndị nwere ihe ịga nke ọma, hapụrụ mba ahụ na 1980s maka ebe ịta nri na French Guiana. Afọ ole na ole mgbe amụrụ Odsonne, n'oge na-adịghịkwa anya, ha kwagara France.
Odsonne Edouard Nzụ ezinụlọ:
Maka ọtụtụ ndị kwabatara, mpaghara ndị dị na Paris bụ ebe kachasị mma iji zụlite ezinụlọ dị n'etiti.
Mgbe ha kwagara na Metropolitan France, nne na nna Odsonne Edouard biri na Bobigny, bụ obodo dị na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ nke Paris. N'ebe ahụ, ha zụlitere nwa ha nwoke, bụ ndị a kara aka.
Odsonne Edouard Afọ Ochie - Mmụta:
Ndị nne na nna na-eto eto nọ n'etiti ụdị nne na nna ahụ kwere ka ụmụ ha gbaa bọọlụ mana na-ekwusi ike ịghara iji ya mebie agụmakwụkwọ.
Na nchịkọta, ụlọ akwụkwọ dị mkpa maka ma nna ma nne mana ọ bụghị maka Odsonne bụ onye kwuru otu oge na nyochaa Onzemondial;
Schoollọ akwụkwọ dị ndị mụrụ m mkpa. N'ihi ya, naanị m so ya ka m mee ka obi dị m ụtọ. Ọ bụghị n'ihi na ọ masịrị m. N'anya ndị nkuzi, enwere m ihe ụtọ karịa. Gi, ejisiri m ike mee ezigbo akara.
Ndị nne na nna na-akwado nkwado, n'agbanyeghị na ha hụrụ agụmakwụkwọ n'anya, mechara nwee obi ebere iji dị mma Odsonne na ịnwa ịgba bọl na ọgbakọ ime obodo, AF Bobigny.
Mgbe ọ dị afọ isii, nwata ahụ debara aha na klọb ebe ọ malitere ụdị agụmakwụkwọ ọ hụrụ n'anya.
Odsonne Edouard Biography - Ndụ Ndụ Mmalite:
Ka oge na-aga, atụmanya nke ịbụ ọkachamara n'ịgba ọsọ nwere mmeri karịa ịga akwụkwọ. Odsonne na-eto eto lebara anya na agụmakwụkwọ nke abụọ ya ma na-etinye oge dị ukwuu n'ịchụso ọrụ ya.
Mkpebi mere ka ihe ịga nke ọma soro, na naanị afọ atọ mgbe ọ sonyere AF Bobigny, nwatakịrị ahụ amalitelarị isi ihe mgbaru ọsọ na ịnakọta trophi.
Nwoke French abụghị onye ọbịa na Trophies kemgbe ọ bụ nwata. Dị ka e kwuru, ọ meriri ihe mgbaru ọsọ goolu maka asọmpi mgbe ọ nọ na AF Bobigny.
Bebụ igwe ga-eme ihe mgbaru ọsọ n'oge a dị nro pụtara otu ihe. Ọ bụ eziokwu na nnukwu klọb na France ga-ahụ ya ma oge na-aga, na-awakpo obere klọb ya, AF Bobigny maka mbinye aka ya.
Odsonne Edouard Biography - tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Ọtụtụ ndị na-amaghị ama, iweghasị PSG Qatari abụghị ihe niile gbasara ịzụrụ talent dị elu Blaise Matuidi na Marquinhos wdg
Ọ bụkwa banyere itinye ego na agụmakwụkwọ ndị ntorobịa. N'afọ ahụ 2011, Odsonne dọtara uche nke ndị PSG scout n'ụzọ kachasị iche. Ugbu a, ka anyị gwa gị akụkụ ahụ nke Biography.
Otu Odsonne si bụrụ onye egwuregwu PSG:
Dabere na DailyRecord, A manyere onye isi ndị isi nke Paris Saint-Germain ịhapụ atụmatụ ilele ihe ndozi ndị ntorobịa nke mechara kagbuo n'ihi ihu igwe dị njọ.
Kama nke ahụ, ọ gara ile anya AF Bobigny ebe Edouard na-egwu egwu.
Na N'ajụjụ ọnụ Onye egwuregwu, Reynaud kwuru na ikike nwata ahụ ruru ya ozugbo, ihe ngosi nke kpaliri ya ịwakpo ụlọ ọrụ ahụ, gụnyere ịnweta nnabata ndị nne na nna Odsonne Edouard maka mbinye aka ya.
? Na mbido, enwere m nnukwu ọ excitedụ isonye na PSG. Mara na m ga-ekerịta otu ụlọ elu dịka ọtụtụ ndị egwu kacha mma na France, enwere m obi anụrị.
Echetara m, otu ụbọchị tupu m ahapụ ezinụlọ m. Anabatabeghị m ụra abalị niile n'ihi na m na-eme ọsọ ọsọ ịga (ọchị).
Onye na-eto eto kwuru na akaụntụ ya nke ịbanye PSG. Odsonne Edouard s membersa ndzɛmba yinom a obotum ama no do wɔ ndzɛmba yinom ho.
N'agbanyeghị ọsọ ọsọ, ịhapụ ndị mụrụ ya na ndị ọ hụrụ n'anya hapụrụ. Obi dị m ụtọ, n'ịchọ igbochi owu ọmụma nwa ha nwoke, nna Odsonne kpaliri PSG inye nwa ya nwoke, nleta ezinụlọ kwa izu.
Oge ntụgharị ka ọ bụrụ nke ọma - UEFA European Glory:
N'afọ nke ikpeazụ ya na ngụsị akwụkwọ agụmakwụkwọ ndị ntorobịa, Odsonne kpọrọ onye isi ndị otu egwuregwu mba U17 nke France.
Daalụ maka isi ihe mgbaru ọsọ ya na PSG, ahọrọ nwata ahụ ka ọ sonye na 2015 UEFA European Under-17 Championship.
You maara?… Ime Anwansi Odsonne n'akụkụ Dayot Upamecano na Zidine Zidane si nwa Luca sokwa ndị nyere France aka bulie nnukwu iko a.
Inweta ihe iko a ezughi oke, n'eziokwu, igwe ihe mgbaru ọsọ na-eto eto jidere onye kachasị akara nke onyinye asọmpi ahụ yana ihe mgbaru ọsọ 8 ya.
Onye na-eto eto nwere obi uto na ntorobịa ya na GOALS. Foto ebe a, ọ bụ onye egwuregwu bọọlụ kachasị nwee ọfụma na 2015 UEFA European Under-17 Championship.
Odsonne Edouard Biography- Bilie na Akụkọ Ama:
Kama ịda, nwa okorobịa ahụ na-eto eto nọgidere na-eto site n'ike n'ike n'ike ya nwere isi ike.
Na PSG 2015-16, oge anwansi nwetara ihe mgbaru ọsọ 32 na egwuregwu 27, ihe ngosi nke butere ya Titi d'Or.
Nke a bụ onyinye tozuru oke maka ọkpụkpọ agụmakwụkwọ ntorobịa kacha mma, ma nwee mmeri ya na mbụ Kingsley Coman. Ọzọ, kpakpando French-Guyana bụ akụkụ nke otu ahụ nyeere PSG aka merie Al Kass Cup.
Lee, rụzuru Rocket ọzọ, dị ka onye na-eto eto. O nwere otu n'ime ọrụ ndị ntorobịa kachasị mma na Football.
Mgbe o debanyere nkwekọrịta ọkachamara na ndị isi Paris Saint-Germain, Odsonne dị ka ọtụtụ ndị gụsịrị akwụkwọ na-eto eto - ihe dị ka Yacine Adli- malitere inyocha ohere nke inweta uwe elu otu. Enweghi ike ịpụ apụ Edinson Cavani dugara ya na nkwaga n’inye ego ego.
Site na mgbazinye ego mgbazinye na Toulouse, Odsonne malitere ịtụle mba ofesi. Loangafere ọzọ na Celt bịara baa uru.
Na Hoops, Ime Anwansi Odsonne weghachite ya OGWU MOJO. Ihe mgbaru ọsọ 37 nke onye ọkpụkpọ egwu maka klọb ahụ nyeere ha aka imechi "treble" akụkọ ihe mere eme ha.
Ime Anwansi Odsonne so na ndị nyeere Celtic aka inweta mmeri 2018-2019 Domestic n'okpuru Brendan Rodgers.
Dị ka n'oge edere Odsonne Edouard Biography, ndị egwuregwu football hụrụ ya dị ka otu n'ime Europe si 50 kasị mma na-eto eto. Dị ka Moussa Dembele, Rocket nwere ikike nke ịbụ ọdịnihu nke football football. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu (gụnyere ihe ngosi dị n'okpuru), bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Odsonne Edouard Mmekọrịta Ndụ- Nwanyị nwanyị, Nwunye?
Site na ndị GOALS niile gbara ọsọ rue oge ntorobịa ya na nnukwu ọrụ ya, anyị maara na ọ gaghị ekwe omume na onye egwuregwu France enweghị ndị na-enwe mmasị na ụmụ nwanyị.
Site na nke a, ịbụ ọgaranya, Tall na Handsome zuru oke iji dọta ndị enyi nwanyị na ndị na-ewere onwe ha ihe nwunye. Ajuju kacha bu ajuju bu;
Ọnye na-bụ Odsonne Edouard's Girlfriend? … He Nwunyela?… O nwere Nwunye?
Ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ jụrụ- Onye bụ Nwanyị Odsonne Edouard? … He Nwunyela?… O nwere Nwunye?
Na ikpe site na foto nke ọnọdụ mmekọrịta Odsonne Edouard, ị ga-achọpụta ihe ọ na-elekwasị anya ugbu a- nke bụ football.
O nwere ike ịbụ na onye na-egbu French, dị ka n'oge anyị na-eke Biography, nwere ike ịnwe enyi nwanyị mana ọ jụrụ ịme mmekọrịta ya n'ihu ọha- ikekwe ọ bụghị n'oge a dị egwu nke ọrụ ya.
Nke a bụ n'ihi na o kwuputara n'otu oge na ya na-agba mgba siri ike iguzogide ọnwụnwa.
Odsonne Edouard Ndụ Nkeonwe:
Mata njirimara ya site na pitch ga-enyere gị aka ịchọta onye ọ bụ nke ọma. Na-amalite, Ime Anwansi Odsonne bụ onye na-enwe ezigbo ntụsara ahụ na profaịlụ dị ala ọ na-etinye n'èzí pitch.
N'agbanyeghị ihe mgbaru ọsọ ya niile, ndị mmadụ anaghị anụ ya n'èzí football. Ọ bụ n'ihi na onye na-eti ihe, dị ka ekpughere n'ajụjụ ọnụ, bụ onye nwere ezi uche. N'okwu ya;
N'elu pitch, ndị na-agba bọl na-anụ m obere n'ihi na m bụ onye nwere uche. Enweghị m mmasị na igosipụta n'èzí football. Kama, m na-achọ ikwu uche m naanị n’elu ala.
Odsonne Edouard Ndụ Nke Onwe. N'ebe a, ọ na-anọdụ ala nke ọma n'oche oche nke ime ụlọ ya, maka mkparịta ụka banyere ụdị onye ọ bụ. Ebe E Si Nweta: Onzemondial.
Jigide; e nwere àgwà ọzọ dị mma o nwere. Onye na-eti ihe bụ onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ. Rocket nwere ike ige ndị na-akatọ ya ntị, ọbụnadị ndị na-ekpe ya ikpe na-adịghị mma.
Nye ya, Nnyocha na-adịghị mma, n'echiche ya bụ Ezi. Ọ na - enyere ya aka ịga n’ihu ma meziwanye ka mmadụ.
Odsonne Edouard Web salon:
Onye na-aga n'ihu, obi abụọ adịghị ya, jiri uru $ 5 Million Net Worth dị ugbu a, € 40K kwa izu na ụgwọ ọnwa 2million kwa afọ. Eziokwu bụ, Odsonne Edouard enweghị nnukwu nsogbu ibi ndụ dị ala.
Imefu ego iji mee ka ụlọ ya dị mma zuru oke maka ya. N'ikpeazụ, ndị ịgba ọsọ ụkwụ ekweghị n'echiche nke igosi okomoko, dịka ụgbọ ala posh na nnukwu ụlọ (mansion) wdg.
Odsonne Edouard Web- onye obi ụtọ na-enwe obi ụtọ, na-ahọrọ ibi ndụ dị mma n'ụlọ ya dị mfe karịa itinye ego na ụgbọ ala posh.
Odsonne Edouard Ndụ Ezinụ:
N'akụkụ a, anyị ga-agwa gị gbasara ndị nne na nna Odsonne Edouard na onye ọzọ nọ n'ezinụlọ- nwanne ya nwanyị.
Banyere Nna Odsonne Edouard:
Nke mbụ, anyị na-asọpụrụ nna Haiti maka ebumnuche, nrọ na ebumnuche ọ na-etinye, ọ bụghị naanị maka onwe ya, mana maka nwa ya nwoke.
Dịka ọmụmaatụ, ọ kwadebere ụzọ wee kwe ka Odsonne bie nrọ ya nke ịbụ ndị ịgba ọsọ ụkwụ kama ịrapara na agụmakwụkwọ nke na-adịghị arụ ọrụ maka ya.
Anyi agaghi echefukwa otu nnukwu nna siri kpalie PSG ka o kwe ka nleta kwa izu ka Edward na-eto eto di nso na ezinulo ya.
Banyere mama Odsonne Edouard:
Mgbe ọ gụchara ndị ịgba bọọlụ gbara ajụjụ ọnụ Onze Mondial, anyị kwenyere na nne ya bụ isi nri na ezinụlọ; nwa nwanyị feat.
N'ihi nkwado ezinụlọ nke sitere n'aka ya, Odsonne amụtala ugbu a esi esi nri gastronomy French na Italiantali. Ọzọkwa, pasta na Bolognese sauce, curry osikapa na anụ ihendori.
Banyere ụmụnne Odsonne Edouard:
N'ajụjụ ọnụ nke ndị ịgba ọsọ ụkwụ na Onze-Mondial, anyị ghọtara na o nwere nwanne nwanyị nke okenye bụ onye nyere aka igbazinye ego na-akụziri ya etu esi esi nri.
You Nwanne Odsonne Edouard bụ ọkachamara na-esi nri nke na nke 2019, rụrụ ọrụ na ụlọ oriri na ọ thatụ thatụ nke na-esi nri nke ọma.
Onye na-eti ihe n'oge ọ bụ nwata biri na nwanne ya nwanyị nke okenye tupu ọ kwaga n'ụlọ ya.
Odsonne Edouard Eziokwu:
Na ngalaba mmechi nke akụkọ nwata anyị na Biography nke edepụtara, anyị ga-enye gị ozi ị nwere ike ị maghị gbasara egwuregwu bọọlụ French. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido.
Eziokwu # 1- O jidere ya maka ịgbanye onye na-agafe:
Ihe a merenụ mere n'oge ọ dị afọ iri na ụma na mgbe ya na Toulouse nọ na mbinye ego. E boro Odsonne (onye dị afọ 19) na CCTV n'ime ụgbọ ala ya obere oge tupu mmadụ agbapụ pellet 'Airsoft' n'isi onye bịara abịa.
Mgbe onye uwe ojii jidere ya mgbe e jidere ya, ọ jụrụ ebubo ahụ, na-ekwu na ọ gbaziri ụgbọ ala ya n'aka enyi ya maka ụbọchị ahụ.
N'ụzọ dị mwute, ọ nwetara ọnwa anọ n'ụlọ mkpọrọ, kwụsị a 6,000 ma nye iwu ka ọ kwụọ € 2,600 na emebi. Ntaramahụhụ akwụsịghị n’ebe ahụ; a machibidoro ya iburu ngwá agha ruo afọ ise.
Eziokwu # 2- Nkwụ ụgwọ ụgwọ ọnwa na ntanye nke nwa amaala:
Kwa Afọ € 2,083,200 $ 1,806,983 £ 1,463,808
kwa ọnwa € 173,600 $ 150,582 £ 121,984
Kwa Izu € 40,000 $ 34,696 £ 35,564
Kwa .bọchị € 5,714 $ 4,957 £ 5,081
Kwa elekere € 238 $ 207 £ 212
Kwa Nkeji € 4 $ 3.4 3.5
Sekọnd € 0.06 $ 0.06 0.06
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Odsonne Edouard'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Ikpe ikpe site na nkwụsịtụ dị n'elu, ọ ga-eju gị anya ịmara na nkezi nwa amaala Scottish nke na-akpata £ 2,613 kwa ọnwa ga-arụ ọrụ maka afọ ise na ọnwa asaa iji rite ụgwọ ọnwa Celtic kwa ọnwa Odsonne Edouard.
Eziokwu # 3- Ihe ndị Fans na-ekwu banyere FIFA FIFA:
Fansfọdụ Fans katọrọ Odsonne Edouard maka igwu egwu na otu egwuregwu nke otu French 2. sayfọdụ na-ekwu na ọ kpasuru iwe ebe ndị ọzọ na-amasị ya, chọrọ ka otu kachasị dị ka Arsenal tinye ya n'ihe egwu.
Agbanyeghị, nyocha anyị banyere FIFA stats na-egosi na onye amụrụ mụọ na Guiana adịghị eme ihe ọjọọ. Odsonne nwere ụdị FIFA yiri nke onye ọkpụkpọ France ibe ya, Marcus Thuram.
Stats FIFA na-egosi na ọ ga-abụ bọmbụ n’ọdịnihu
Iji nweta ihe omuma ngwa ngwa, anyi edoziwo tebụl na-achikota Odsonne Edouard's Biography.
Aha n'uju: Odsonne Édouard
A mụrụ: 16 Jenụwarị 1998 na Kourou, French Guiana.
Ndị nne na nna: Ma nne ma papa m bụ ndị agbụrụ ezinụlọ Haiti.
Nwanne: O nwere nwanne nwanyị nke na-esi nri.
elu: 1.87 mita ma ọ bụ 6 ụkwụ 2 sentimita.
Education: Gụsịrị akwụkwọ ruo ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Coud adịghị asọmpi ya Bac STMG n'ihi football.
Isi mmalite nke mmụọ nsọ: Cristiano Ronaldo
Ihe omume: Ihi ụra na Ikiri TV
Net uru: $ 5 Nde (2020 stats)
Ebumnuche Ọrụ: Iji ghọọ otu n'ime ndị na-awakpo kachasị mma na Europe.
Anyị nwere ekele maka oge na mbọ emere iji gụọ ogologo akwụkwọ ozi a na Odsonne Edouard's Biography. Anyị kwenyere na ọ bụghị overrated na o nwere ikike ịbụ otu n'ime Ndị na - eme egwuregwu kachasị mma na Europen Football.
Biko gwa anyị ihe ị chere gbasara ihe anyị dere na ngalaba nkọwa. Banyere ndị na-agba ọsọ, dịka ọmụmaatụ, ọ ga-abụ onye zuru oke Olivier Giroud dochie anya ndị otu mba French?